Sceneries pa Rikoooo vari haanzi zvaitika, pane kurigadzirisa? (Win 7 / 8 +)
Izvi zvinoshanda nhivi Prepar3D uye FS2004.
By default, FSX ari kuiswa mune «C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X». Chinetso ndechokuti musi Windows 7 uye 8 + kana kunyange Windows 10 haufaniri kuva ichazotonga mafaira mukati «Microsoft Flight Simulator X», izvo zvinodzivisa chirongwa kubva kunyora configuration faira. Kugadzirisa kuti dambudziko, uende «C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games», ipapo ita kodzero tinya forodha «Microsoft Flight Simulator X», tinya «Properties», ipapo pamusoro «Security» Tab. Pano, sarudza «Users (xxxxxx)», ipapo tinya «yokugadziridza». Pahwindo richangomuka, sarudza zvakare «Users (xxxxxx)», tinya «Full kuzvidzora», ipapo «Modifications». Zvino, unotofanira tinya «OK» uye Windows achaita kunatsurudza ari Permissions.